यी हुन् नेपालका टप टेन धनि व्याक्ति , कसको कति सम्पति छ ? - jagritikhabar.com
१०. ज्ञानेन्द्र शाह: राज परीवारमा जन्मेका ज्ञानेन्द्र शाह पुर्व राजा पनि हुन् । उनले २००१ देखि २००८ सम्म शासन चलाएका थिए । शाहको १७ वटा कम्पनीहरूमा शेयर रहेका छन् भने उनको कुल सम्पति ५ करोड ८० लाख डलर रहेको छ । हाम्रो सन्देश डटकम बाट